अव्यवस्थित बजारलाई नियमन गर | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
अव्यवस्थित बजारलाई नियमन गर
Published On : १३ आश्विन २०७७, मंगलवार १२:५८
कोरोनाको जोखिम देखा जाला भनेर व्यापारीले हिम्मत गरेर पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘परेको ब्यहोरौँला’ भनेर ग्राहकहरु किनमेलमा खचाखच छन् ।
छ महिना लामो कोरोना महामारीको ‘लकडाउन’पछि अहिले बजार गुल्जार भइरहेका बेला कतिपय पसलमा एउटा समस्या देखिएको छ, ‘ग्राहक ठग्ने’ । आइतबार गोरखा नगरपालिकाले बजार अनुगमन गर्दा अधिकांश पसलमा मूल्य सूची थिएन । अनुगमनको क्रममा विभिन्न बेथिति देखिए, त्यसमध्य टड्कारो समस्या भनेकै पसलमा मूल्यसूची नराख्ने गरेको भेटियो ।
केही नयाँ कुरा सुरु गर्ने तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने रीत बनेको छ । मूल्यसूची राख्नैपर्ने अभियान पनि यही रीतको शिकार बन्यो ।
केहीबर्षअघि गोरखा उद्योग वाणिज्य संघले सबै पसलहरुमा मूल्यसूची अनिबार्य अभियानलाई जोडतोड बनाएको थियो । मूल्यसूचीको फ्लेक्सबोर्ड वितरण गरेको पनि थियो । तर समय बित्दैजाँदा ती फ्लेक्सबोर्ड झुत्रिए, नयाँ बनेनन् वा बनाउन चाहेनन् । फलतः अहिलेका पसलहरुमा मूल्यसूची छैन ।
के बजार मूल्यसूची मात्रै एउटा त्यस्तो कडी हो, जसले बजार व्यवस्थित बनाउँछ ? होइन । तर यो अत्यन्त सानो तर अपरिहार्य कडी हो । कमसेकम ग्राहकको अनुहार, लवाइ, हाउभाउ हेरेर भाउ गर्ने प्रवृत्ति यसले अन्त्य गर्छ ।
सँधै अनुगमनमा म्याद सकिएका सामान भेटिनु, सँधै मूल्य सूची नराखेको भेटिनु बानी जस्तै भएको छ । अनुगमनकर्ताले पनि पक्कै यस्तो भेटिन्छ भन्ने मानसिकता बनाएर अनुगमन गर्ने भए । जस्तो मानसिकता बनाएर अनुगमन गरियो, त्यस्तै भेटिँदा अनौठो लाग्दैन, साधारण जस्तै लाग्छ । जब साधारण जस्तै लाग्छ भने ‘यस्तै हो, चलेकै छ’ भनेर आँखा चिम्लन सुरु हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित नियमक निकायले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।